Eritreritr'i atonamia - Namana Serasera.org
atonamia 26/11/2009 06:12
Manontany tena hoe inona no tena but @ fiainana zany raha samy ho faty ihany ..... inona ny antony hiainana ...
5. small 26/11/2009 12:29
mmh... fa inona loatra re ny manjo anao ao izao no dia tena tsy misy espoir tahaka izao??...
Izao ary e! mino aho fa raha olona mpanara-dia an'i tompo ray ao ambony dia manana vali-teny hafa ho lazaina ho anao.
Fa ny hevitro dia izao: rehefa tena leo enao, rehefa hoy ianao hoe inona ny antony hiainana rehefa ho faty ihany dia mamonoa-tena e!. Mavesatra be io lazaiko io an! Ary tsy famporisihina ny hanao ny tsy fanao akory. Fa raha izay marina no hitanao fa mety ve moa....Dia rehefa tsy sahy dia tsy aleo ve mba atao milay ilay izy rehefa voatery ny hijanona eto an-tany ihany sa....??
Fa aza mamono tena izany a!
4. fahamarinana 26/11/2009 12:29
Misy foana ry anatomia na dia ny hifandaginina eto monja aza !hihi ! Mahereza e,tsy tahaka izao hatrany ny fiainana fa mety misy tsara koa,araka ilay andro,ilay oklona,ilay namana ,ilay fotoana e!Ary indrindra ilay vintana !
3. tess 26/11/2009 11:59
ô ry atonamia ah! eo amin'ny 79 taoana eo ho eo anie ny fotoana hivelomanao raha tsy matin'ny aretina aloha be na accident ianao ka nahoana no tsy asiana but sy bojectif ny fiainana ....
NY UN AN aza efa ela ery ny miandry azy raha manana projet mahafinaritra iny kou indrindra fa ity taoana bdb ho diavina mandrapahatonga ny fahafantesana....
2. atonamia 26/11/2009 11:51
iee aleo tonga d tsiss nininn, iee aleo tsy namako fa za tsy mahatanty miady.
Hitako fotsn we rehefa tonga n fotoana hoe tsy hahafahanao manoatra eo @ fiainana dia manjary manontany tena hoe inn marina n tena zao sy zao, ca vaut la peine ve n hanaovana zavatra, ny hifankatiavana, ny hananana namana, ny hanaovana an' itsy ny hanaovana an' iroa.
Injisy an .... snif sn..i....f.....
1. small 26/11/2009 09:25
mmmhh ...question existentielle izy izany.
...dia tsy hitia ve zany satria mety hisaraka any aoriana.
...dia tsy hinambary zany satria satria mbola ho noana.
...dia aleo zany tsy tanora satria mbola ho antitra ihany.
...dia aleo zany tsy mi-voyage fa avy dia miandry eo amin'ny fasan-drazana.
...dia aleo ve zany za tsy ho naman'i antonamia satria mety hiady ao afara.
Tsy haiko loatra re ny tena but amin'ny fiainana, fa na dia izany aza ça vaut la peine d'être vécue. Na ny plaisir ny hahalala sy ny hitia anao fotsiny ihany aza no atao eto an-tany.